26 / 05 / 2021 25 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 465 Views စာ0မှတ်ချက် 10278 ရဲစခန်း, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, 76178 နေ့စဉ် Bugle, 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော်, Batman, ဘင်ဥရစ်, ကြောင်နက်, ဓါးရွက်, တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်, Creator Expert, Daredevil, Dc, Firestar, Lego, Lego Batman, Lego တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego မှ marvel, Lego Ninjago, Lego Spider-Man, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Mark Stafford, Marvel, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, Ninjago, Reddit, Spider-Man, အပြစ်ပေးသူ, VIP
အဆိုပါ Lego Group မှနောက်ဆုံးထုတ်အကြီးစား Marvel မော်ဒယ်လ်ကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်နောက်ဆုံးရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သိထားသင့်သမျှ 76178 နေ့စဉ် Bugle.
VIP အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ကြီးမားသော ode ကိုမှာယူနိုင်ပြီဖြစ်သည် Spider-Man နှင့်သူ၏ friends ဖြောင့်ကနေ (နှင့်ရန်သူများကို) LEGO.com (စတော့ရှယ်ယာများဆိုင်းငံ့ထားသည်) သို့သော်သင်သည်မြင့်မားသောမိုးမျှော်တိုက်အပေါ်ခြံစည်းရိုးတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ ၃၇၇၂ အပိုင်းအစကွန်ကရစ်ပြားမှအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းမသိပဲဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်သိသင့်သည့်အချက်ငါးချက်ကိုအောက်သို့ဆွဲချပါ 76178 နေ့စဉ် Bugle သေးသည်အခြားအပေါ်ကျဆင်းယူမီ Lego သင်၏ဖော်ရွေသောရပ်ကွက်အတွင်းရှိ web-slinger ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရင်နှင့်မတူပဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
5 - ကြီးမားတယ် အလွန်ကြီးသည်
မယုံနိုင်လောက်အောင် 82cm အရပ်ရှည်ရှည်ရပ်လျက်, 76178 နေ့စဉ် Bugle မင်းရဲ့အခြားအစုံအားလုံးနီးပါးကိုစာသားအတော်လေးထောင်ပြီးလိမ့်မယ်၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်Bugle ၏ခေါင်မိုးပေါ်ရှိအင်တင်နာကြောင့်သာပိုတိုသည်။ ၎င်းကိုထားရှိရန်သင့်လျော်သောအထပ်မြင့်စင်တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုကျယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Lego city အပြင်အဆင်၊
ကြောင်းအထင်ကြီးအမြင့်စေပါဘူးမသာ 76178 နေ့စဉ် Bugle အရှည်ဆုံး Lego Marvel ယခုအချိန်တွင်သတ်မှတ်ထားသည်မှာနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်စံချိန်တင်ချိုးနိုင်သူလည်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းတွင်စူပါသူရဲကောင်းများ၏အများဆုံးအပိုင်းအစများရှိပြီးအကွက်ထဲတွင်ဒြပ်ပေါင်း ၃၇၇၂ ပါဝင်သည်။ (ယခင်စံချိန် - ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ခဲ့သည် Batman'' s ကို ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile။ ) ဒုတိယ၊ အခြားမည်သည့်တစ်ခုထက်မဆိုသေးငယ်သည် Marvel or DC ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့မော်ဒယ်လ်, အက္ခရာစုစုပေါင်း 25 ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ။
3 - ၎င်းသည်အသေးစားဓာတ်ပုံများစုဆောင်းသူများအတွက်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်
Daredevil အသေးစားရုပ်ပုံကိုဘယ်လောက်ကြာကြာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာလဲ။ ရှည်လျားလွန်း - ဒါပေမယ့်မသာပါဘူး 76178 နေ့စဉ် Bugle ထိုတောင်းဆိုမှုကိုဖြန့်ဝေပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်စေသည် Lego Punisher, Blade, Black Cat, Firestar နှင့်ထင်ရှားသောသတင်းစာသတင်းထောက်များ၏မူကွဲများ။ (Ben Urich အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးလို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ မြန်နှုန်းအထိရဖို့။ )
2 - အမြဲတမ်းမီးခိုးရောင်မဟုတ်ခဲ့
အတွက် Mark Stafford ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်း 76178 နေ့စဉ် Bugle ရုပ်ပြအဆောက်အအုံကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်ဆောက်ခဲ့သောကွန်ကရစ်ကျောက်ပြားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည် architecture - ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ တစ် ဦး Q & A အရသိရသည် Lego ဒီဇိုင်နာ reddit အပေါ်တည်ခင်းheည်သူ မူလကအမှောင်ဖျော့တွင် Bugle ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့် minifigures ဖွဲ့စည်းပုံဆန့်ကျင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ခွင့်ပြုပါမီးခိုးရောင်မှ switched ။ အိုး, ထိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ခဲ့သည် once ဝါသောလွန်း။
၁။ ကျန် LEGO အစုံများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်
ကောင်းပါပြီ။ Modular Buildings Collection စံသတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာသောသူအားလုံးဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပါပဲ 10278 ရဲစခန်း, 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော် နှင့် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်. ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သူတို့အား modular (နှင့် modular-လိုက်ဖက်တဲ့) အစုံဘေးမှာတက်တန်းစီပုံကိုကြည့်ရှုရန်။ တိုတိုပြောရရင်မင်း st ကိုလုပ်ဖို့လိုကောင်းလိုမယ်art သင့်ရဲ့အခြားအဆောက်အ ဦ များအနည်းငယ်ထပ်ထည့်ခြင်း။
76178 နေ့စဉ် Bugle VIP များအတွက်ယခုမှာယူနိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည်ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် Brick Fanatics ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီးသင့်ရဲ့မိတ္တူအမိန့်အားဖြင့်ပါဘူး တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← တစ် ဦး LEGO ဖြစ်ပါတယ် Star Wars လာမည့်နှစ်တွင်စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စီးရီး?
LEGO အုတ်၏ Secret Life ကိုကြိုတင်မှာယူရန်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က →